Ii-4 P's zeeNjini zokuKhangela zaNgoku | Martech Zone
Umhlaba weSEO uyangcangcazela kwiindaba zokuba IMoz isika abasebenzi bayo kwisiqingatha. Bayathetha ukuba baphindaphindeka phantsi ngokujolisa okuhlaziyiweyo kuphando. Baye baba ngoovulindlela kunye neqabane elibalulekileyo kwishishini le-SEO iminyaka ngoku.
Indlela endijonga ngayo ayisiyiyo ndinethemba lokwenza uphando ngeOrganic, kwaye andiqinisekanga apho kulapho iMoz kufuneka iphindwe kabini Ngelixa uGoogle eqhubeka nokwakha ukuchaneka kunye neziphumo ezisemgangathweni ngobukrelekrele bokuzenzela kunye nealgorithms ephuculweyo, iimfuno zokuqesha abacebisi bokukhangela kunye nabasebenzi ziyahamba. Kwaye Zixhobo ze SEO ziyavela veki nganye ezikhuphisana nezinto ezifana neMoz.
Kwiminyaka emihlanu edlulileyo, uninzi lwethu Ukudibana nentengiso iinzame zazinikezelwa kwi-SEO. Besinaye umhlalutyi weSEO. Phambi kweminyaka emi-5 kwaye sisebenzisa izixhobo ezithandekayo ezivela kubaxhasi bethu kwi gShift ezibonelela ngengqondo yethu yonke ubukho bewebhu, hayi uphando lwethu olwenziweyo. Idityaniswe ne kubahlalutyi kunye nee-webmasters, isisombululo se-gShift sisinceda ukuba sibeke iliso kwimizamo yethu yokuthengisa ye-omnichannel, kubandakanya nokusebenza kwendalo, ukongeza kuphembelelo lophando, ukufunyanwa komxholo, ukubeka esweni uphawu lwentengiso, nokunye okuninzi.
I-SEO ayiseloshishini kwakhona; yinxalenye yomzi mveliso. Yinto eqongeni. Liqhinga ngaphakathi kwesicwangciso sentengiso yedijithali. Kufuneka ulwazi kwintengiso nganye, hayi isikhundla sayo. Wonke umthengisi kufuneka aqonde indlela yokusebenzisa iinjinjini zokukhangela ngaphakathi kwisicwangciso esipheleleyo kwaye aqonde apho kufanelekileyo kwilizwe lethu le-omnichannel. Ixesha elide kakhulu, sibukele njengeenkampani ze-SEO kunye namaqonga asiphosileyo kwisikhephe ekusebenziseni ukuguqula, ukubhala umxholo omkhulu, kunye nokondla kukhokelela kuguquko. Ixesha elide, imboni ye-SEO ibimalunga ne-backlinks, amagama aphambili, kunye nenqanaba ngelixa abathengi kunye neinjini zokukhangela beqhubele phambili.
Iingcali aziyi kuvumelana nam, kodwa sinamakhulu abathengi abaqhuba kakuhle ngokugxila kwethu okuhlaziyiweyo. Ngelixa siqinisekisa ukuba iisayithi zabaxumi bethu zakhiwe ngengcebiso zikaGoogle kwaye siyaqhubeka nokubeka iliso kwinqanaba, ayisiyiyo apho sisebenzisa khona uninzi lweenzame zethu kwakhona. Ndingu hayi ukuthi i-SEO yile ayibalulekanga, iseyindlela ephambili yokufumana. Ndithi utyalomali kwi-SEO aluzukufumana kubuya kwezinye iindlela. Ezo zicwangciso kukunyusa intlalontle, ukunyusa okuhlawulelweyo, ubudlelwane noluntu kunye nokwakha ithala lencwadi.
Ukunyuswa kweNtlalo -Amathemba akho kunye nabaxhasi abatyeleli indawo yakho rhoqo. Nangona kunjalo, bayazibandakanya ekuhlaleni. Ukuze unxibelelane apho akhoyo amathemba kunye nabaxumi, kuya kufuneka ukhuthaze umxholo wakho apho bakhoyo. Ezo ndaba zosasazo zasekuhlaleni zihlala zifikelela kubaphulaphuli abatsha, abathi emva koko baxoxe nge-Intanethi, bakhe igunya lethu lokukhangela izinto eziphilayo.
Ukunyusa okuhlawulelweyo Ngelixa singayithanda i-WOM kunye nokwabelana ngentsholongwane kumxholo ukwandisa ukufikelela kwiimveliso zethu, inyaniso elula kukuba intengiso yibhulorho ekufuneka sityala imali kuyo ukwandisa oko kufikelela. La mathuba ahlawulwayo ahlala efikelela kubaphulaphuli abatsha, abathi ke basixoxe nge-Intanethi, bakhe igunya lethu lokukhangela izinto eziphilayo.
Eyobudlelwane boluntu -Ukuba neqela leengcali ezifuna amathuba okupapasha uphawu lwakho kunye neetalente zangaphakathi kufuneka. Amanqaku asuka kupapasho olufanelekileyo, udliwanondlebe kwiipodcast, kunye namathuba okuthetha esiwafumana kwiqela lethu le-PR avelise ezifanelekileyo, negunya eliphezulu lokukhankanya ukuba sifumana igunya lokufuna.
Ithala lencwadi leNkulumbuso Umxholo we-evergreen awusancedi nabaphi na abathengi bethu. Amanqaku apheleleyo ngophando, uyilo, umxholo onzulu, infographics, kunye namaphepha amhlophe afumana ukubambeka ngakumbi. Endaweni yokugxila kwimveliso yomxholo, sigxile ekwakheni ilayibrari yomxholo egqibeleleyo, ebanzi yomthengi ngamnye kuthi.
Ngaba kukhona okwahlukileyo? Ewe kunjalo. Abavelisi besiqulatho seshishini kumashishini akhuphisana kakhulu banokufumana umda kakhulu UkuSebenza kweeNjini zoPhando. Yandisa iimpembelelo ngezigidi zamaphepha kwaye kuya kubakho imbuyekezo enkulu kutyalo-mali. Kodwa ezo nkampani zizodwa, hayi umthetho. Uninzi lwamashishini lungangcono ukonyusa utyalomali kule migaqo mine ingentla.
tags: ukuxhuma umvaamagamamozUnyuso oluhlawulelweyoInkulumbusoimveliso yenkulumbusoEyobudlelwane boluntuSEOukunyuswa kwentlaloiphepha elimhlopheWhitepaper
Isishwankathelo esinomdla, enkosi.